Saawudii Arabiyaan himannaa bilbila sooreessa addunyaa, Jeef Bezoos, butuu waakkatte - BBC News Afaan Oromoo
Saawudii Arabiyaan himannaa bilbila sooreessa addunyaa, Jeef Bezoos, butuu waakkatte
Goodayyaa suuraa Hariiroo Ilmi Mootichaa Mohaammad bin Salmaaniifi Jeef Bezoos qaban erga Jamaal Kashoogjee ajjeefamee hammaateera
Himannaa Sawud Arabiyaa Ilmi Mootichaa Mohaammad bin Salmaan abbaa qabeenyaafi hoogganaa Amaazoon kan ta'an Jeef Bezoo butuudhaan itti-gaafatamoodha jedhamaniif biyyattiin waakkatteetti.
Gabaasawwan garuu, ragaan ergaawwan bilbila Ilmi Mootichaa itti fayyadamanirraa argaman bilbila abbaa qabeenyaa kanaa cabsuuf yaalii isaanii agarsiisa jedhameera.
Imbaasii Saawudii kan Ameeriikaatti argamu garuu kun 'soba' waan ta'eef irra deebiin qoratamuu feesisa jechuun waamicha dabarseera.
Hariiroon Sawud arabiyaafi Jeef Bezoos erga gaazexeessaan beekamaa Jamaal Kaashogjii ajjeefamanii booda akka hin taanetti hammaateera. Jamaal Kaashogjii gaazexaa 'Washington Post' abbaan qabeenyummaa isaa kan Jeef Bezoos ta'erra hojjechaa ture.
Himannaan bilbila butuu kana duraa ammoo kan ajjeechaa barreessaa 'Washington Post' ture gaazexessaa Jamaal Khaashogjii, kan imbaasii Saawudii Istaambul keessatti raawwatameen hidhata qaba kan jedhu ture.
Ajjeechaa gaazexessaa kanaan wal qabatees Saawudiin himatamuun namoota muraasa murtii du'aa irratti dabarsuun ishee ni yaadatama.
Gaazeexaan 'the Guardian' jedhamu akka gabaaseetti ammoo, bilbilli abbaa qabeenyaa kanaa osoo jalaa hin butamiin dura karaa WhatsApp Caamsaa 2018 keessa bilbila harkaa Mohaammad bin Saalmaan irraa erga ergameefiin booda ture.
Kana malees, 'The Financial Times' akka gabaaseetti qorannoo odeeffannoo hatuu kanarratti taasifameen, odeeffannoo hedduu bilbilli abbaa qabeenyaa kanaa kan hatame erga viidiyoon ilma mootii kanarraa itti ergameen booda ta'uu adda baheera jedha.
Haata'u malee, ergaan tiwiitaraa teessoo Imbaasii Saawudii kan Ameerikaatiin barraa'e ammoo himmannicha soba jechuun akka qoratamu gaafateera.
Gaaffii BBCn dhaabbata abbaa qabeenyaa Jeef Bezoos dhiyeesseef hanga ammaatti deebiin hin kennamne.
'Bilbila butuun gocha salphaadha'
Gochaan kun attamiin akka raawwatame ilaalchisee gadi-fageenyaan ragaansaa ifaa ta'u baatulleen, ergaa viidiyoo karaa WhatsApp bilbila sooreessa kanaatti ergameen kan wal qabatee ta'uu quba qabu.
Waa'ee ergaa viidiyoo jedhame kanaas ifatti kan hibsame hinjiru garuu qabiyyeen ergaa Ilma Mootichaa gara sooreessa adduunyaa kanatti ergame maal akka jedhu baruuf fedhii olaanaatu jira.
'Butuun bilbilaa akkasii daran salphaadha' jedhan ogeessi kompitaraa Pirofessar Alaan Wuudwaard.
Viidiyoon waan gaarii fakkaachuun ergame sunis sooftweerii hin taane fayyadamuun bilbila ittiin ergame sanarratti hundeeffannoo fudhachuu dandeessisa.
Isaan boodaas namoota odeeffannoo bilbila namaa keessaa hataniif waa barbaadan hunda argachuun salphaa ta'aaf. kunis odeeffannoo bilbila, GPS, kaameeraa, odeeffannoowwan baankiifi ergaawwan fakkaatan hunda haala salphaan argachu danda'a.
Jamaal Kaashogjii: 'Ilmi mootii Saawuudii qoratamuu qabaata'
Ajjeechaa Kaashogjii: Reenfii isaa 'asiidii keessatti bulbulame'
Ajjeechaa Jamaal Kaashogjii irratti Tuurk bal'inaan ibsa laatte
Abbaa Jaamboo - diraamaa waggoota 19f raadiyoon darbaa ture duuba eenyutu jira?
Dr Faantaa Maandafroo Itti Aaanaa Pirezidaantii naannoo Amaaraa tahuun muudaman.
Itoophiyaatti namootni 600 ol koronaavaayirasin walqabatee hordofamaa jiru
Nama abbaa kee ajjeese waliin wal arguu, araaramuu
Nama haadha keessan ajjeesse osoo argitanii maal jettuun?